Mai Chibwe VekwaZimuto: Saizi Yechombo
Kukura kwechombo chomurume kune basa here uye Saizi yacho ndeimwe chete here pamurume umwe chete kana chimire? Ndichada kumbotsanangura nyaya iyi nokuti vamwe venyu vanoda zvoku kombeya varume, zvikuru kana wakambovata nevarume vakawanda. Fungwa yako inokasira kuongorora kusiyana kwezvombo zvavo.
1 murume achitarisa chombo chake anotarisa kubva mudenga chombo chiri pasi. chombo kazhinji hachina kuti tasa saka Estimate yake inonetsa opedzisira opa mupimo uri pasi.
2 Varume vakawanda vanoda chombo chikuru kupfuura chavanacho nokuti vanofunga kuti vakadzi vanoda zvikuru kuti vagute, saka murume achitarisa chombo chake anoona sokuti saizi yake haigutsi mukadzi.
3 Mukadzi achitarisa chombo anotarisa kazhinji akachibata mumaoko achihwa nokurema kwacho opedzisira apa mupimo uri pamusoro.
4 Mukadzi anoziva kuti chinofanigwa kupinda maari saka anoona chakakurisa pane zvaanoda.
Asizve kune vamwe varume vane mazihombe anosvika kuma 30 cm. Asi ndiko kuremara ikoko. Ukaroogwa neakadaro unototenga lubricant yokuwedzera kunyorova asi still handifungi kuti anokwanisa kupinza chombo chese usingagwadziwi. Chinhu chakangozonakawo pavarume vakadai ndechokuti Chombo chikurukuru hachimiri zvokuoma sechesaizi kwayo. Ukaterera vanoziva nazvo vakaita Research dzacho vanoti chombo chakakurisa hachinyatsomira. Chinhu chakanaka kuti mukadzi haakuvari nacho
Ukahwa mukadzi achingotaura nezvesaizi yemurume ari kuda kutaura kuti murume wake haatori nguva yakakwana pakuita kwavo. Saizi chaiyo ine basa kuvarume kupfuura kuvakadzi. Isu tongoda murume anechombo chinomira, oita chido chokurhojana nomukadzi wake nguva yakareba (10 minutes or more from insertion to ejaculation) vachikoirana, oitazve rudo pamukadzi wake. Zvokuti isaizi ani izvo hazvina basa rakawanda asi kungoti kana waona musi warinenge rakanyatsotsamwa ukafunga kuti ndini ndaritsamwisa kudai uye kuti rikapinda rese rinondiuraya iro rozopinda rokunakira pane kukuuraya unonakigwa, kwete nesaizi asi ne psychology yako wega.
Variko varume vane chombo chidikidiki asi vashoma
Hakuna mushonga wekukudza chombo, chero ukaenda kunyika ipi zvayo. Pedza hako mari yako uchitenga mishonga asi chombo chako hachiwedzeri kukura.
Kune varume vane zvombo zvidiki pabhinzi yomukadzi ane bhinzi hombe. Asi chero murume akadai anokwanisa chete kukuzvarisa mwana uye mwana iyeye kana ari mukomana anokwanisa kuzoita zichombo ziguru. Nyaya yokukura kwechombo inonetsa kuhwisisa nokuti haina pateni yainotevera. Chatinongoziva ndechkuti murume akasvika makore 21,hazvichaiti kuti chombo chake chiwedzere kukura chero akashandisa mushonga wakadii zvawo kana kuswera achidhonza. Asi anokwanisa kuwedzera kuoma kwacho kana chimire. Izvi zvinobva nokuwanda kweropa ronoenda muchombo kana chimire. Murume akawana mukadzi anogarotamba nechombo chake kwenguva asi asingamuitisi kubudisa urume, zvinowedzera ropa nokuwedzera kumira kwechombo.
Mukadzi ajaira hombe anozoguta here nediki?
Varume vanonetseka nenyaya yokuti kana akaroora mukadzi asiri mhandara anofunganya kuti kuda murume waiva nomukadzi uyu ange ane hombe kupfuura yake. vanoda kuziva kuti mukadzi ange ajaira chombo chihombe anozoguta here nechidiki. Mhinduro yomubvunzo uyu inoti iyo "Hongu anoguta kana iwe murume wake ukajairawo kumunonokera uye kumuitira zvaanokuudza kuti uite. Kana pasina zvaakuudza bvunza kuti chii chinomunakira akuudze.
RESEARCH pasaizi yechombo
Vakaita RESEARCH vanoti ivo ukaongorora varume vane zvombo zvihombe zvinohi zvakakura chose kupfuura zvevamwe, uchaona kuti vashoma asi vazhinji vevashoma ivava vanhu vanofarira kuita zvechingochani kana kuti kuvata nevakadzi zvese nevarume, (BI-SEXUAL)
Saka pamwe ukada murume ane chombo chikurukuru uchazohwa zvohi anopota achiroja vamwe varume.
Kana wada murume ane mabhora makuru, hwisisa kuti anohura kupfuura vane AVERAGE kana madiki.
1 Chombo chikuru chinonaka kupfuura chidiki here? Murume ndiye anonaka nokuda kwe attitude yake kumukadzi uye panyaya yokurhojana. Kana mese makasununguka kunaka kunowedzera zvisinei nesaizi yechombo.
2 Saizi yechombo inonyanyodiwa nani? Varume ndivo vanongoda mazichombo makuru iri ngari yokusagona kubata mukadzi zvakanaka. Vanofunga kuti kupinzwa ndiko kunonaka kupfuura zvese.
3 Vakadzi todii nenyaya iyi? Gara uchiudza murume wako kuti ane hombe uye inogutsa, kuti asagarofunganya nazvo. Murume ngaagare achifunga kuti mukadzi ari kuguta. Zvikuru kana iwe muridzi uchiziva kuti aimbovata nevamwe vakadzi musati maroorana. Hauzivi kuti ane complex yakabvepi saka ibasa rako kumupa CONFIDENCE. Kusakugutsa kazhinji ingari yokukasira kukudiridzira, kwete yesaizi yechombo. Saka tsanangura kuti adzidze kukunonokera. Musi waanononoka ukaguta, chimutendawo chose kuti azive kuti agona basa. Usaudza murume kuti waguta iwe usina kuguta.
4 Varumewo kugarotsoropodza matinji, magaro, mazamu emukadzi wako handizvo. Garomuudza kuti iwawo aanawo makuru uye mukadzi wako anonaka. Zvinomupa manyawi okowedzera chikapa. Tichitaura chokwadi chaicho, varume hamukoni kuguta muchiti nokuti mukadzi ane chii zvacho chikurusa kana kuti chidiki. Murume kana apinza chombo mumukadzi chete anonakigwa uye kusiya urumepo kereva kuti aguta.
5 Varume vakawanda vari pakati pe 12 cm ne 16 cm kana chombo chimire, kukora 10-15 cm. Vakadzi kudzika kwechitubu chisina chombo mukati 8-10 cm. Ukaturika makumbo pamafudzi emurume muchirhojana, chombo chinotonyura zvokunobata madziro, chero chiri chipfupi hacho. Kana chakareba unotohwa kuti chasvika kure zvokuti unoturunura rimwe gumbo kuti nzvimbo yomukati iwedzere, kana murume achikoira zvehasha musi iwoyo.
6 Kana murume ane rino zidanda, fongora wopatsanisa makumbo, wodhefura musana. Chitubu chinorebawo murume opinza kusvika paada. Chero akakoira sei anokwana mukati uye mese munonakigwa pasina kugwadziwa. Kana ukavata manhede unokwanisa futi kuisa makumbo pamwe chete kuti asapinza chombo chese.
Saizi dzevombo zvimire tichitarisa nyika nenyika:
Kureba kwechombo (cm
nhengo yemurume kukura kune basa here
hombe ndiyo inonaka here
Ndingakudza sei yangu
Vakadzi vanoda hombe here
Ndingaziva sei kuti mukadzi wangu ari kuguta
Kuiswa nemurume ane hombe
kukura kwe mboro kune basa here pabonde
Posted by Mai E Chibwe at 14:38
Makadii mai chibwe, tinofara chaizvo nekuti dzidzisa zvakanaka mudzimba. Ndiri mukadzi wechidiki, Ini ndinoda kubvunza kuti kune here mushonga unoshandiswa kana murume achiti anoda kuwedzera chombo chake kuti chikure, uye hazvina here maafter effects. Ndibatsireiwo
Kana wazoita zichombo ziguru woitei naro. Zvesaizi ndezvenyu varume. Isu toda rudo uye pakuvatana murume oita nguva yakawanda arimukati. zviviri izvi ndizvo zvedu isu. Imi nesaizi dzenyu hameno kutimenge muchida kuzodii.
Saizi handiyo inogutsa. Murume ndiye anogutsa. Hakuna zvaunokwanisa kuita panyika yesekutii chombo chikure. Kune vanotengesa mishonga, nemapiritsi ne zvimwe zvakadaro asi hapana chinosanda.
Tatenda, siyabonga, thank you. Dzidziso yakadai yakanaka.
Panyaya yesaizi apa kwatiri vakomana panenyaya. Kana uripabonde unoita kungapasina chauri kuita. Unobva wafunga kuti idiki, hazvibvunzike kumusikana nokuti unenge wakunyar\_ futi
Ndoosaka ndakataura kuti nyaya yeSAIZI yechombo inyaya huru kuvarume kupfuura kuvakadzi. Mukadzi akangoregwa onyorova zvoreva kuti ava nezemo, obva ashandwa pabhinzi yake zvakakwana, ozopinzwa chombo chero chesaizi ipi zvayo, fungwa yake inongomirira pakuti avata nomurume wake kwete kuti murume ane zaizi 5 kana 7 yechombo.
Mukadzi anofunga nezvesaizi nokukombeya varume mukadzi akapfuura nekune varume vakawanda uye asina zemo rakakwana zvokumirira kunakigwa nokuvatana nomurume wake. Kana wakabhowekana nezvimwe zvinhu usinei nomurume wako ndipo unofunga nyaya dzisina maturo.
Nyaya yokuhwisisa ndeyokuti chitubu chomukadzi chinongovhurika kusvika panokwana saizi yechombo chiri kupindapo. Hapagara pakavhurika asi kuti panogara pakavharika kusvika chombo chopindapo. Hachina kuita sepaipi inogadzigwa ine saizi. Chombo chomukadzi isaizi dzese nokuti chinotatamuka kuti chombo chikuru chikwanise kupinda. Ukuwo choswinya kuti chombo chidiki chiite kubatwa. Koitazve kuti mukadzi akasimbisa masuro anokwanisa kushinya chero kachombo kadikidiki zvokuti varume vaviri umwe ane chikuru umwe ane chidiki, vanonakigwa zvakafanana.
ndingaitei kuti chitubu changu chishinye ndane vana vaviri.
Zvokuti vana vangani hazvina basa izvo chine basa kuzvibatsira wega. Verenga apo pakahi kusimbisa masuru.
Ko inga vamwe vakadzi vanotaura kuti vanoda hombe "dzinemazitsinga"(sekutaura kwavo). Hauzozive kuti wakanyatsokwanira umwe wako here. Ndinoyedza kutamba kwenguva yakareba uye handikasike kudiridzira zvekuti ndinotombonzi ndinonyanyisa kuenderera pakukoira dzimwe dzenguva. Asi ndinombofunga kuti zvimwe chasara kuva nechombo chakakura.
Iyeye mukadzi anokuudza kuti anoda hombe ndiyezve mukadzi umwecheteyo anokuudza kuti une hombe saka zvoreva kuti ari kunonakigwa nezaizi iyoyo. Murume ane rino zisaizi asingagoni kurishandisa haambofi akanakira mukadzi kupfuura murume ane saizi kwayo anogona basa.
Koitazve nyaya yokuti kana ukaroora mukadzi akambofambafamba ndiye angatotanga nyaya yokukombeya iyi. Kana achingozivewe zvoreva kuti ndiyo saizi yake iyoyo motonakirana kusvika azotanga kuhura.
Ukaverenga nyaya yesaizi chero dzakanyogwa nevakadzi vava vakuru chose unohwa kuti saisi isingafosiwi kupinza ndiyo yakanaka, Kwete yokuhi mira nditange ndajairira nokuti saizi yakurisa.